Akawanda akakosha masitaera ekutamba koshitomu dhizaini - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Akawanda akakosha masitaera ekutamba koshitomu dhizaini
Dhizaini dhizaini dhizaini inoteedzera kukosha kwekutenderedza uye hunyanzvi hunhu hwakasimbiswa muchimiro uye zvemukati zvemutambo wekutamba. Zvipfeko zvekutamba zvinofanirwa kuve zvakasanganiswa nemabasa ekutamba, kuratidza kwakasarudzika mazano ekugadzira uye zvekuita zvehunyanzvi, uye zvakare kuratidza iwo akasarudzika maitiro enguva.
Iko kune kunyanya anotevera masitaera ekutamba koshitomu dhizaini:
1. Hippie maitiro:
Icho chiratidzo chekupfeka kwakasarudzika. Iwo madhaidhi acho anonyanya kuteedzerwa maruva, akaomarara mativi, zvishongo zvishongo, nezvimwe. iwo mavara acho anonyanya kudziya matoni ehutsvuku, yero uye orenji, uye inotonhorera toni yegirini nebhuruu; iwo magadzirirwo acho anonyanya kusunga-anokodzera masitaira ayo anoratidza muviri curve, akareruka uye akapusa Iyo jira rakapfekwa.
2. National maitiro:
Izvo zvipfeko zvinonyanya kugadzirwa nezvakarukwa uye batik. Iyo micheka inowanzo iri donje uye rineni, uye masitayera kana ruzivo zvine hunhu hunhu. Parizvino yakakurumbira Hanfu, cheongsam, uye yakavandudzwa zvipfeko zvemunyika ndiwo makuru masitayera. Ehezve, ivo zvakare vanosanganisira mapfekero emunyika kubva kuNepal neIndia.
3.European uye American maitiro:
Kutsigira mamiriro ekunze, kureruka, zvakasikwa, zvisina kujairika, machira akareruka uye akapusa, yakasimba pfungwa yecollocation uye dhizaini.
Chechina, hip-hop maitiro:
Hip-hop inotsigira rusununguko, asi kuchine zviyero zvekupfeka zvakajeka, senge dzakasununguka misoro uye bhurugwa, ngowani, machira emusoro, nezvimwewo. Hip-hop maitiro anewo pfungwa yemafashoni.
5. Maitiro ekumaruwa:
Maitiro evafundisi anoteedzera echinyakare, akapusa uye echisikigo runako. Dhizaini yakachena yekotoni, mativi madiki, yunifomu mitsetse, maruva akatsemuka, nezvimwewo zvinhu zvakajairika mumufambiro wevafundisi.
Matanhatu, punk maitiro:
Mushure ma1990s, iyo post-punk maitiro akaonekwa muindasitiri yemafashoni, uye ayo makuru masheni aive erima, akapararira uye nesimbi.
Zvipfeko zvekutamba zvinofanirwa kugadzirwa zvinoenderana nemusoro wenyaya uye mumhanzi wekutamba, uye kuratidzwa kwepfungwa uye zvinoreva kutamba. Dhanzi koshitomu dhizaini inoteerera kune danho mhedzisiro, kuwirirana kwese, uye kuenzanisa kwemavara. Zvipfeko zvekutamba hazvishamise sezvinobvira. Ivo vanofanirwa kugadzirwa pamwe chete nevatambi, mimhanzi uye madingindira.
Yapfuura:Iyo yakasarudzika hunhu iwe yaunofanirwa kuziva mune ye ballet kirasi
Tevere:Makorokoto mukubudirira kwakazara kwe6th Wuhan Dance Costume uye Dhizaina Zvigadzirwa Expo